Ahoana ny fomba hisorohana ny alika tsy hibontsina amin'ny olona? | Tontolo alika
Mibolisatra olona ve ny alikanao ary tianao hijanona izy? Raha izany, ny zavatra voalohany tokony ho fantatra dia ny antony hitondrany izany, satria io ihany no fomba hahitana vahaolana izay tena mandaitra. Aza matahotra anefa: hanampy anao hahita ny niandohan'ny olana izahay.
Ankoatra izany, hanolotra anao izahay torohevitra momba ny fomba hanakanana ny alikako tsy hibontsina olona ary ho toy izany, biby sambatra.
1 fa maninona no alona ny alika?
2 Ahoana ny fomba hisorohana ny olona tsy hibontsina?
fa maninona no alona ny alika?
Ny alika dia afaka mivovo noho ny antony maro, ary izao no tena lehibe:
Fahasosorana: Raha avelantsika irery ilay biby nefa tsy afaka manao na inona na inona isika, na raha tsy mitandrina tsara azy isan'andro isika dia hahatsapa ho sorena, ary koa mankaleo ary noho izany dia hikotrika. Mba hisorohana an'io dia tena zava-dehibe ny filalaovantsika azy, ny hitondrantsika azy hivezivezy ary, raha fintinina dia manokana fotoana isika amin'izany.
Ahiahy misarakaRaha mandany fotoana be ianao, na raha alika miankina betsaka aminay ianao dia mety hiteraka fanahiana. Mba hanampiana anao dia afaka manome kong anao izahay mandritra ny fotoana tsy anenanay ary manaraka ireo torohevitra ireo fanahiana fisarahana.
Olana ara-pahasalamana sy / na fahanterana: Rehefa mihantitra dia mety tsy ho afaka hihaino intsony ny alika ary / na hanana olana ara-pahasalamana mahazatra amin'ny fahanterana. Vokatr'izany dia ara-dalàna raha hodi-kazo izy rehefa mahatsapa fa misy zavatra mampidi-doza. Isika, amin'ny maha-mpikarakara azy, dia tokony eo anilany ary hiezaka hampitony azy amin'ny mozika kilasika na amin'ny diabe (tsy mila manome kilalao, vatomamy na fikolokoloana mihitsy isika rehefa eto amin'ity fanjakana ity izy satria azo adika ho valisoa ho an'ny marary)
Olana amin'ny alika hafa: Raha tsy nifanerasera tsara izy, na raha nifanandrina tamin'ny alika hafa, dia hiondrika izy haka ireo biby hafa hitandrina lavitra azy. Noho izany, zava-dehibe ny manatona matihanina hanampiana ireo volon'ondry hahafantatra ny fomba hifandraisany amin'ny karazany.
Ahoana ny fomba hisorohana ny olona tsy hibontsina?
Betsaka ny zavatra azontsika atao mba hisorohana ny olona tsy hibontsina. Ny voalohany sy manan-danja indrindra dia ento mitsangatsangana isan'andro izy. Ny alika reraka dia ho biby izay amin'ny ankapobeny tsy te hivovo. Saingy, raha sanatria ka manao izany izy, dia hitondra amina lasaka alika iray ho antsika ary homenay azy isaky ny mahita fa misy olona manantona anay. Amin'izany fomba izany dia hampifandraisiny tsikelikely ny olombelona amin'ny zavatra tsara (ny fitsaboana).
Ao an-trano, hatramin'ny andro voalohany, Ilaina ny miakanjo akanjo ho an'ny be antitra, miaraka amin'ny satroka, fehiloha, ... raha fintinina, miaraka amin'ny karazana akanjo sy akanjo rehetra. Araka izany, isaky ny mandeha mitsangatsangana isika dia tsy hahatsiaro ho ampitahorina na iza na iza ny alika ary ho afaka hankafy ny any ivelany. Noho io antony io ihany, dia ampirisihina mafy ihany koa ny fanasana olona samy hafa ao an-trano, izay hanome anao fitsaboana.
Manantena izahay fa ireto toro-hevitra ireto dia mahasoa ho an'ny alikanao hitsahatra tsy hivily olona 🙂.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hisorohana ny alika tsy hibontsina amin'ny olona?
Nitondra alika kely Schnauzer aho, 4 taona 5 volana lasa izay, nifanaraka tsara tamin'ny zanako vavy aho, fa tamin'ireo roa lahy tao an-trano dia nibolisatra mafy izy rehefa nijoro na nandeha izy ireo, inona no azoko atao?
Ny alika Moni schnauzer, noraisiko izy tamin'izy 3 taona, efa 2 taona aho no nanana azy, tena tsara izy, fa kosa rehefa misy mody, na fantany izy, dia tsy mitsahatra mivovo fa amin'ny fomba mamoy fo, manao toy izany koa izy rehefa miditra izahay ary mivoaka ny trano izahay ary tsy hitako izay hatao, satria tsy zaka izany.
Afaka mandro alika bevohoka ve isika?
Mba handefasana alika na tsia